ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ သမီဖွဈသူထရကျရှာတို့ရဲ့ ရိုကျကှငျးနောကျကှယျက ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို ထုတျပွလာတဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ – Shwe Yaung News
ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ သမီဖွဈသူထရကျရှာတို့ရဲ့ ရိုကျကှငျးနောကျကှယျက ခဈြစရာပုံရိပျလေးတှကေို ထုတျပွလာတဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ
စန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့ အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့အသညျးကှဲသီခငြိးတှကေို လိုကျဖကျညီအောငျ သီဆိုတတျတဲ့အပွငျ မွနျမာဇာတျကားတှမှောလညျး ကရြာနရောကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့
အနုပညာလမျးကွောငျးမှာလညျး ပါရမီပါသူလေးဖွဈသလို သူမအိမျထောငျကပြွီး သမီးလေးတဈယောကျရပွီးသညျအထိ သူမကို ခဈြပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှကေလညျးအမြားအပွားပါပဲနျော..
စန်ဒီမွငျ့လှငျရဲ့ သမီးလေး ခငျလငျးထငျ (ထရကျရှာ)လေး ကတော့ မှေးစ ကတညျးက ခဈြမှေးပါတယျလို့ ဆိုရလောကျအောငျ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ခဈခငျမှုကို ရရှိထားတဲ့ ကလေးလေးပါ။
ပါးဖောငျးဖောငျးကဈကဈလေးနဲ့ အသညျးယားစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးက စန်ဒီမွငျ့လှငျနဲ့တဈထရောတညျးတူတာကွောငျ့ သူမတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျလုံးက တုနျအောငျခဈြနရေတာ ဖွဈပါတယျ ။
အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ ခဈြစရာကောငျးလှနျး လှတာကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေအခဈြပိုနကွေရပါသေးတယျ။မမစေန်ဒီမွငျ့လှငျ ကလညျး လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာကနေ သမီးလေးကို ခဈြတဲ့
ပရိသတျတှအေတှကျ ထရကျရှာလေးရဲ့ ခဈြစဖှယျ အပွုမှုလေးတှေ ပွုလုပျတဲ့အခါ ဗီဒီယိုရိုကျပွီး အမွဲလိုလို မြှဝလေရှေိ့ပါတယျ။
မကွာသေးခငျကမှ ထရကျရှာလေးက အသကျ ၂ နှဈပွညျ့ပွီးတာ ဖွဈပမေဲ့ အရမျးကိုလညျတဲ့ သမီးလေးကိုလညျးအားလုံးက ဝိုငျးခဈြနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ မမေဒေီဒီးက သမီးလေးနဲ့အတူ ကွျောငွာရိုကျထားတဲ့ ပုံလေးတှကေိုတငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ….
” အဖွူရောငျသားအဈဖဇနျနဝါရီလကုနျတုနျးကရိုကျခဲ့တဲ့ကွျောငွာ ရိုကျကှငျး နောကျကှယျက သူတို့သားအဖ selfie လေး အမှတျတဈရတငျလိုကျပီ ‌အျော ၇လတောငျရှိသှားပီပဲ ” ဆိုပွီးရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ထရကျရှာလေးရဲ့ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးတှကွေို့ညျ့ပွီး ပြျောရှငျပါစနေျော..
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ သမီဖြစ်သူထရက်ရှာတို့ရဲ့ ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်က ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို ထုတ်ပြလာတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့အသည်းကွဲသီချငိးတွေကို လိုက်ဖက်ညီအောင် သီဆိုတတ်တဲ့အပြင် မြန်မာဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခြင်းကို ရယူထားနိုင်သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုလည်းကောင်းသလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူမကတော့ ခုချိန်ထိကို ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားဆဲပါပဲနော်။
အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်း ပါရမီပါသူလေးဖြစ်သလို သူမအိမ်ထောင်ကျပြီး သမီးလေးတစ်ယောက်ရပြီးသည်အထိ သူမကို ချစ်ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်းအများအပြားပါပဲနော်.. စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ သမီးလေး ခင်လင်းထင် (ထရက်ရှာ)လေး ကတော့ မွေးစ ကတည်းက ချစ်မွှေးပါတယ်လို့ ဆိုရလောက်အောင် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ခစ်ခင်မှုကို ရရှိထားတဲ့ ကလေးလေးပါ။ပါးဖောင်းဖောင်းကစ်ကစ်လေးနဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးက စန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့တစ်ထေရာတည်းတူတာကြောင့် သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးက တုန်အောင်ချစ်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ချစ်စရာကောင်းလွန်း လှတာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေကအချစ်ပိုနေကြရပါသေးတယ်။မမေစန္ဒီမြင့်လွင် ကလည်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ သမီးလေးကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ထရက်ရှာလေးရဲ့ ချစ်စဖွယ် အပြုမှုလေးတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး အမြဲလိုလို မျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကမှ ထရက်ရှာလေးက အသက် ၂ နှစ်ပြည့်ပြီးတာ ဖြစ်ပေမဲ့ အရမ်းကိုလည်တဲ့ သမီးလေးကိုလည်းအားလုံးက ဝိုင်းချစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ မေမေဒီဒီးက သမီးလေးနဲ့အတူ ကြော်ငြာရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကိုတင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်….
” အဖြူရောင်သားအစ်ဖဇန်နဝါရီလကုန်တုန်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်း နောက်ကွယ်က သူတို့သားအဖ selfie လေး အမှတ်တစ်ရတင်လိုက်ပီ ‌အော် ၇လတောင်ရှိသွားပီပဲ ” ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ထရက်ရှာလေးရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကိုြ့ည့်ပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေနော်..
ဖမျးဆီးခံထားရတဲ့ Beauty Blogger ဝငျးမငျးသနျးကို အရမျးသတိရကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ စီစဉျတငျဆကျသူ သဇငျနှယျဝငျး
အကွမျးဖကျစဈကောငျစီ၏ ငှစေက်ကူအသဈ‌ထုတျဝမှေုတှငျ ပါဝငျပတျသကျသညျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို အကွမျးဖကျမှု ကူညီသူမြားအဖွဈ အ‌ရေးယူမညျ